၎ နှစ်အရွယ်ကလေးကို မုဒိန်းကျင့် သတ်ပြီး ရေတွင်းထဲလာပစ်စဉ် ရပ်ကွက်မှ ဝိုင်းဖမ်း - Cele Platform
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ခမီမြို့တွင် “၄နှစ်ကလေးအား မုဒိန်းကျင့် အလောင်းဖျောက် ရေကန်တွင်းသို့ပစ်ချထားမှု ဖြစ်ပွား
ကျိုက်ခမီ ကျားဆိပ်နေ ပွဲစားလုပ်သူမိန်းမတစ်ဦးရဲ့သမီး၎နှစ်အရွယ် ကလေးအား လှေသားတစ်ဦးမှ မုဒိန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ညနေ ၄နာရီလောက်က ကလေးအားမုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ ကျူးလွန်သူမှ ခေါ်သွားခဲ့သည်။ ည ၇နာရီ ၈နာရီဝန်းကျင်ထိ ပြန်မရောက်လာခဲ့သဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတို့ရှာဖွေရာ ကျုးလွန်သူဟုယူဆရသူက ကလေးအား ရေကန်တွင်း ပစ်ချပြီး ထွက်ပြေးသည်ကိုမြင်၍ ရပ်ကွက်နေသူများလိုက်ဖမ်းကြရာ မိလေသည်။ စစ်ဆေးမေးမြန်ကြရာ မုဒိန်းမှုကျးလွန်ကြောင်းသိရပြီး သေဆုံးသူကလေးအား ရေကန်တွင်းရှာဖွေကြလေသည်။
ကလေးအလောင်းအား ရေကန်တွင်းရှာဖွေနေသော်လည်းမတွေ့ပဲ ကန်ထောင့်တနေရာမှ ကလေးအလောင်းပေါ်လာလေသည်။ အချိန်အားဖြင့် ည၁၀နာရီခွဲဝန်းကျင်ရှိနေပြီ။ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သား များ ဆူပူအုံကြွလာ၍တာဝန်ရှိသူများ ဖျန်ဖြေပြီး မုဒိန်းမှုကျးလွန်သူအား ရဲစခန်းသို့ နီးစပ်ရာလူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ဖမ်းခေါ်သွားသည်။
သေဆုံးသူ ၄နှစ်အရွယ် ကလေးအလောင်းအား လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ကဲ……ကျိုက်ခမီမြို့မှာ ခုလိုဖြစ်လာပြီး … ဒီထက်ဆိုးမဲ့အခြေအနေတွေလဲဖြစ်လာဦးမှာပဲ ညဘက်တွေဆို သောင်တင်နေတဲ့ လှေသားတွေ အုပ်စုလိုက် သွားနေကြတာ …။
လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ရန်ပြုသလိုလုပ်သွားတာတွေ မြင်နေရတာကြာပြီး… ဒါတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲ အားလုံးပေါ့ဗျာ သတိဝိရိယနဲ့နေကြရတော့မယ်…….
ကို့သားသမီးကလေးသူငယ်တွေကိုလဲ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံစောင့်ရှောက်ကြပါဗျာ …..လူစိမ်းတွေဆို ဖြစ်နိုင်သမျှ သတိထားကြပါဗျာ……
သတင်း – Pyae Khant Phyo ဓါတ်ပုံ – ဟိတကာရီဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များနာရေးကူညီမှုအသင်း
မုဒိမျးကငျြ့ သတျဖွတျထားတဲ့ကလေးအလောငျးကိုရတှေငျးထဲ လာပဈစဉျ ရပျကှကျမှ ၀ိုငျးဖမျး
မှနျပွညျနယျ ကြိုကျခမီမွို့တှငျ “၄နှဈကလေးအား မုဒိနျးကငျြ့ အလောငျးဖြောကျ ရကေနျတှငျးသို့ပဈခထြားမှု ဖွဈပှား
ကြိုကျခမီ ကြားဆိပျနေ ပှဲစားလုပျသူမိနျးမတဈဦးရဲ့သမီး၎နှဈအရှယျ ကလေးအား လှသေားတဈဦးမှ မုဒိနျးမှုဖွဈပှားခဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ညနေ ၄နာရီလောကျက ကလေးအားမုနျ့ဝယျကြှေးဖို့ ကြူးလှနျသူမှ ချေါသှားခဲ့သညျ။ ည ရနာရီ ၈နာရီဝနျးကငျြထိ ပွနျမရောကျလာခဲ့သဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူနဲ့ အိမျနီးနားခငျြးတို့ရှာဖှရော ကြုးလှနျသူဟုယူဆရသူက ကလေးအား ရကေနျတှငျး ပဈခပြွီး ထှကျပွေးသညျကိုမွငျ၍ ရပျကှကျနသေူမြားလိုကျဖမျးကွရာ မိလသေညျ။ စဈဆေးမေးမွနျကွရာ မုဒိနျးမှုကြးလှနျကွောငျးသိရပွီး သဆေုံးသူကလေးအား ရကေနျတှငျးရှာဖှကွေလသေညျ။
ကလေးအလောငျးအား ရကေနျတှငျးရှာဖှနေသေျောလညျးမတှပေဲ့ ကနျထောငျ့တနရောမှ ကလေးအလောငျးပျေါလာလသေညျ။ အခြိနျအားဖွငျ့ ည၁၀နာရီခှဲဝနျးကငျြရှိနပွေီ။ ရပျကှကျသူ ရပျကှကျသား မြား ဆူပူအုံကွှလာ၍တာဝနျရှိသူမြား ဖနျြဖွပွေီး မုဒိနျးမှုကြးလှနျသူအား ရဲစခနျးသို့ နီးစပျရာလူနာတငျယာဉျဖွငျ့ ဖမျးချေါသှားသညျ။
သဆေုံးသူ ၄နှဈအရှယျ ကလေးအလောငျးအား လူနာတငျယာဉျဖွငျ့ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျခဲ့သညျဟု သတငျးရရှိပါသညျ။
ကဲ……ကြိုကျခမီမွို့မှာ ခုလိုဖွဈလာပွီး … ဒီထကျဆိုးမဲ့အခွအေနတှေလေဲဖွဈလာဦးမှာပဲ ညဘကျတှဆေို သောငျတငျနတေဲ့ လှသေားတှေ အုပျစုလိုကျ သှားနကွေတာ …။
လမျးသှားလမျးလာတှကေို ရနျပွုသလိုလုပျသှားတာတှေ မွငျနရေတာကွာပွီး… ဒါတှကေိုဘယျလိုဆောငျရှကျကွမလဲ အားလုံးပေါ့ဗြာ သတိဝိရိယနဲ့နကွေရတော့မယျ…….
ကို့သားသမီးကလေးသူငယျတှကေိုလဲ မကျြစိအောကျက အပြောကျမခံစောငျ့ရှောကျကွပါဗြာ …..လူစိမျးတှဆေို ဖွဈနိုငျသမြှ သတိထားကွပါဗြာ……
သတငျး – Pyae Khant Phyo ဓါတျပုံ – ဟိတကာရီဗုဒ်ဓဘာသာလူငယျမြားနာရေးကူညီမှုအသငျး